SMME NEWS 10 March 2018 Informal Trading Kuthokoze abama Tuck Shop ngenombolo yeTheku Nkosikhona Cele SITHAKASELWE nangosomabhizinisi abancane isinqumo sikaMasipala weTheku sokwethula ngokusemthethweni kwenombolo yamahhala ezosetshenziswa ngamalunga omphakatthi waseThekwini namaphethelo ngenhloso yokudlulisela kuMasipala zonke izinkinga abanazo. Ngokusho kwe Meya yomkhandlu iTheku Municipality, uKhansela Zandile Gumede lenombolo kuhloswe ngayo ukuvala igebe phakathi kuma Masipala kanye no Mphakathi. “Umphakathi ubaluleke kakhulu ngaphezulu kwakho konke ongakucabanga. Ngakho ke sibone kubalulekile kakhulu ukuba sethule lolu hlelo ukuze kuzoba lula ukuxhumana kwethu njengoMkhandlu kanye nawo umphakathi okuyiwona vele esiwusebenzelayo.” IMeya igcizelele kakhulu ukuthi lolu hlelo luzosiza ekutheni umphakathi ukwazi ukubika ikakhulukazi ngamanzi nangogesi, okuyizinto athe LAPHA kungesikhathi kwethulwa le nombolo umphakathi ujwayele ukufaka izikhalo ngazo. Osomabhizinisi abancane nabo bakuthakasele ukwethulwa kwale nombolo. UMnu Sandile Madlala waseClermont, entshonalanga yeTheku ongumnikazi we Tuck Shop,uthe lolu hlelo lusho lukhulu emphakathini, nakubona njengosomabhizinisi abasakhula wabe eseveza ukuthi kuyiqiniso elingephikwe futhi elisobala ukuthi nabo bayaphazamiseke kakhulu uma kukhona okungahambi kahle emphakathini abakuwona. “Ngicabanga ukuthi sihle kakhulu lesi sinqumo esithathwe nguMkhandlu weTheku. Phela thina njengosomabhizinisi abancane kuningi okuye kusiphazamise ekusebenzeni kwethu kodwa singazi nanokuthi sizoqalaphi ukuze kuzwakale izikhalo nezimfuno zethu.” Umbono ka Madlala wesekwe ngu Mnu. Jabulani Mvelase, naye ongusomabhizinisi osafufusa waKwaMashu enyakatho yeTheku ophawule ngokuthi le nombolo wethemba ukuthi isho ukuxazululeka kwazo zonke izinkinga abanazo. “Sinethemba elikhulu lokuthi okuningi sesizokubona kuhamba kahle emabhizinisini ethu ngoba uma kukhona okungahambi kahle sizokwazi ukuthi sishayele le nombolo emahhovisini, futhi siphendulwe,” kusonga uMvelase naye ongumnikazi we Tuck Shop. Inombolo ebeyethulwa yile: 080 311 1111 Nkosikhona Cele Umnyango we zokuthuthukiswa komnotho nokuvakasha esifundazweni iKwaZulu-Natal oholwa ngo Mnu. Sihle Zikalala umemezele ukuthi kunesamba semali elinganiselwa ku R57 million ekhishiwe ngenhloso yokufukula osomabhizinisi abasafufusa. UZikalala uveze lokhu ngesikhathi ekhuluma engqungqutheleni yaminyaka yonke ebihlelwe ngokubambisana ihhovisi lakhe kanye nabakwa South African Local Government (SALGA). Ngokusho kuka ngqongqoshe, lezizizumbulu zizohlomulisa kakhulu osomabhizinisi abansundu kanye nalabo amabhizinisi abo asesimweni esibucayi. “Le mali sinethemba elikhulu, lokuthi kukhona ezolekelela ngakho Inyele esandleni kosomabhizinisi abasafufusa kubona bonke osomabhizinisi abasafufusa. Njengohulumeni walapha KwaZulu-Natal siyakuqonda kahle kamhlophe ukubaluleka kosomabhizinisi abancane, yingakho nje singeke sakwazi ukuthi sibayekelele uma sibona ukuthi kukhona okungahambi kahle” kubeka uZikalala ngaphambi kokuveza ukuthi kungumsebenzi wabo njengohulumeni ukuqinisekisa impumelelo kubona bonke osomabhizinisi abakhona esifundazweni. Ungqongqoshe uphinde wengeza ngokuthi unesiqiniseko sokuthi le mali izokuba wusizo olukhulu kuwona wonke amabhizinisi amancane akhona KwaZulu-Natal azokwazi ukuhlomula ngalemali. Ukugida ndawonye kwamabhizinisi amancane ngenye yezinto u Zikalala aveze ibenze bakusukumela kakhulu ukufaka isandla kuwona, wengeza ngokuthi okuyikhona ukumqoka ukuthi amabhizinisi amancane akhule, adlondlobale nawo kungahlale kuthiwa mancane nje unomphela. UNGQONGQOSHE wezokuThuthukiswa komnotho, nezokuvakasha KwaZulu-Natal, uMnu Sihle Zikalala
March 2018 Services/classified SMME NEWS 11
Page 3 and 4: March 2018 SMME NEWS 3 R1.2 billion
Page 5 and 6: March 2018 SMME, what you should kn
Page 7 and 8: Education March 2018 SMME NEWS 7 Du
Page 9: March 2018 SMME NEWS 9
The Developer's Digest, Jan - Mar 2018 Issue
TAXMAN MAR 2018
AutoUrge Mar 2018
Feb - Mar 2013, Issue 171 - Royal New Zealand Navy
Issue 44 Mar 2013 - New Zealand Institute of Agricultural ...
Pontypool Mar - May 2018
Griot Mar/Apr issue
The Spark Magazine (Mar 2018)
Pen People Mar 2018
Mar - Senior News Georgia
Magazine: SMME NEWS - MAR 2018 ISSUE